स्ट्याटकाउन्टरका अनुसार विश्वमा ६२ प्रतिशत प्रयोगकर्ताहरु डेस्कटप कम्प्युटरमा गुगलको क्रोम ब्राउजर चलाउँछन् । २००८ मा सार्वजनिक भएको गुगल क्रोम अहिले नम्बर १ इन्टरनेट ब्राउजर बनेको छ । आजको यस ब्लगमा, यही गुगल क्रोम ब्राउजरमा राख्नै पर्ने ५ वटा अत्यन्तै उपयोगी एक्सटेन्सनहरुको चर्चा गर्दैछु ।
१. द ग्रेट सस्पेन्डर
हामी मध्ये धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको, क्रोम ब्राउजरमा अनगिन्ती ट्याब खोल्ने बानी हुन्छ, कतिपय अवस्थामा पेजको शीर्षक त छोडौँ, फ्यावकन आइकन समेत प्रस्ट देखिन्न । कुनै बेला त हाम्रो ट्याबमा दर्जनौँ साइटहरु एक डेढ महिनासम्म पनि बसिरहन्छ, तर फेरि फर्केर त्यो ट्याब/साइट हेर्दैनौ। क्रोममा धेरै ट्याब खोल्दा, ट्याबले कम्प्युटरको धेरै प्रोसेसिङ पावर, मेमोरी आदि खाइदिन्छ । फलस्वरुप ब्राउजर ह्याङ्ग हुने, कम्प्युटर 'स्लो' हुने गर्छ ।
'द ग्रेट सस्पेन्डर' एक्सटेन्सन प्रयोग गरेर क्रोम ब्राउजर 'क्रयास' हुने, ह्याङ्ग हुने, कम्प्युटर स्लो हुने आदि समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । नामै काफी छ भने झैँ, 'द ग्रेट सस्पेन्डर' ले हामीले खोलेको तर प्रयोग नगरेका ट्याबहरु अटोमेटिक रुपमा केही समयपछि 'सस्पेन्ड' गरिदिन्छ । भन्नको मतलब, ब्राउजरमा मैले एउटा साइट खोलेर समाचार पढ्दैथिँए, तर यत्तिकैमा मलाई अर्को साइट हेर्न मनलाग्यो, म अर्को ट्याबमा अर्को नयाँ साइट खोलेर पढ्नथाल्छु, सम्भवत म अर्को नयाँ ट्याब खोल्छु होला । मैले अर्को ट्याब खोलेर पढिरहँदा, केही समयपछि यो एक्सटेन्सनले अटोमेटिक रुपमा पहिले खोलेको ट्याब 'सस्पेन्ड' (बन्द) गरिदिन्छ । जसले गर्दा, कम्प्युटरको प्रोसेसिङ पावर, मेमोरी आदिको बचत हुन्छ, ब्राउजर ह्याङ्ग हुने, कम्प्युटर स्लो हुने समस्याबाट छुटकारा पाइन्छ । आफूलाई चाहिएको बखत 'सस्पेन्ड' भएको ट्याबमा 'क्लिक' गरेर, फेरि उक्त साइट पढ्न/हेर्न सकिन्छ । 'द ग्रेट सस्पेन्डर' क्रोम वेब स्टोरमा उपलब्ध छ ।
मोमेन्टमले क्रोममा नयाँ ट्याबलाई व्यक्तिगत ड्यासबोर्डमा परिवर्तन गरिदिन्छ । आफूले दैनिक गर्नुपर्ने कामलाई 'फोकस' गर्न प्रयोगकर्तालाई यो एक्सटेन्सनले सम्झाउँछ । मोमेन्टम'मा आफूले गर्नुपर्ने कामहरुको 'लिस्ट' पनि तयार गर्न सकिन्छ । यसका साथै, दैनिक नयाँ फोटो, मौसम, चर्चित व्यक्तिका भनाइहरु मोमेन्टमको विशेषता हो । मोमेन्टम क्रोम वेब स्टोरमा उपलब्ध छ ।
३. एडब्लक प्लस
साइट खोल्दा, साइटमा देखिने १० थरि विज्ञापनहरुले 'डिस्ट्रयाक्ट' गरिरहेको छ भने, ती विज्ञापनहरु रोक्नको लागि 'एडब्लक प्लस' राख्नै पर्ने क्रोम एक्सटेन्सन हो । एडब्लक प्लस क्रोम वेब स्टोरबाट राख्न सकिन्छ ।
४. गुगल यु आर एल सर्टनर
यु आर एल सर्टनर अर्थात वेब साइटको एड्रेस छोटो बनाउने टुल पनि राख्नै पर्ने एक्सटेन्सन मध्येमा पर्छ । इन्टरनेटमा देखिएका, भेटिएका वेबसाइटहरु ट्विटर, फेसबुक, ईमेल लगायत विभिन्न माध्यमबाट सेयर गर्नको लागि लिंक छोटो बनाउन यु आर एल सर्टनरहरु अत्यन्तै उपयोगी हुन्छन् । ब्राउजरबाट कुनै साइट सेयर गर्नुपर्यो भने, गुगल सर्टनरको आइकोन क्लिक गर्नुस्, यसले अटोमेटिक रुपमा लिंक छोटो बनाइदिएर, कपि गरिदिन्छ, यसरी छोटो बनाइएको लिंक सोसल मिडिया, ईमेल, च्याट आदि सबैतिर पठाउन सकिन्छ । यसबाहेक आफूले सेयर गरेको लिंक, कसले, कहाँबाट कति पटक क्लिक गर्यो भनेर थाहा पाउन पनि सकिन्छ । वेब साइटका एड्रेसहरु छोटो बनाउन, बिट ली, देखि अनगिन्ती साइटहरु उपलब्ध छन् । गुगल सर्टनर क्रोम वेब स्टोरमा उपलब्ध छ ।
अंग्रेजीमा लेख्नेहरुका लागि ग्रामरली राख्नै पर्ने एक्सटेन्सन हो । यो एक्सटेन्सनले स्पेलिङ, तथा व्याकरण शुद्धसँग लेख्न सिकाउँछ । अंग्रेजीमा लेख्न रुचाउने वा अंग्रेजीमा लेख्न सिक्न चाहनेहरुका लागि, आफूलाई जाँच गर्नको लागि ग्रामरली एकदमै उपयोगी एक्सटेन्सन हो । ब्राउजरमा एकपटक राखिसकेपछि, जुनसुकै साइटमा पनि ग्रामरली प्रयोग गर्न सकिन्छ । ग्रामरलीको वेब भर्सन पनि उपलब्ध छ । ग्रामरली प्रयोग गर्नको लागि यो लिंकमा क्लिक गरेर क्रोममा एक्सटेन्सन राख्नुहोस् ।
तपाईलाई मन पर्ने क्रोम एक्सटेन्सन कुन हो?